UKhanyi uyaziqhenya ngendodakazi yakhe
UKHANYI Mbawu uthi indodakazi yakhe uKhanukani, ivuthiwe ngokomqondo phezu kwemibono emibi yabantu Isithombe: Instagram/KhanyiReloaded
Bongiwe Zuma | November 9, 2020
UYAZIQHENYA ngendodakazi yakhe ekhombisa ubuhlakani nengakushayi ndiva ukugxekwa kwakhe ezinkundleni zokuxhumana, usaziwayo osekuqale phansi ukungcofwa kwakhe.
UKhanyi Mbau selokhu kuqale isonto uwundabuzekwayo ezinkundleni zokuxhumana ngemva kokuba ebhale ekhasini leTwitter ukuthi uhalela ukuzikhipha, ashaywe umoya nomuntu wesilisa.
Akagcinanga lapho, ubalule nokuthi akafune muntukazana nje kodwa kuzomele kube yindoda enhle ebukekayo neyisicebi.
Yilapho kusuke khona umsindosinamathambo baqala phansi abantu bambiza bizwa kwakhe ngeqola, nokuyigama ebeselithanda ukukhohlweka ngoba ubenza imisebenzi emihle futhi ebonakala esezimele.
UKhanyi uzamile ukuchazela abantu ukuthi ubengaqondile ukuthi ufuna indoda eyisigwili kodwa ubesholo ukuthi umuntu azozikhipha naye, akube yindoda enemali yokuhlangabeza izindleko zokuzikhipha kwabo kungagcini sekukhokha yena kuphela.
Ukuba nendodakazi esikhulile nekwazi ukufunda konke okushiwo ngaye ezinkundleni zokuxhumana, uthe ngeke kuyishintshe indlela ayikhulisa ngayo nembona ngayo njengonina.
“Ngikhulisa indodakazi ekhaliphile nekwaziyo ukubona izinto yehlukanise. Ngikhulisa ingane ekulungele ukumelana nezimo,” kusho uKhanyi.
Eqhuba uthe ukugxekwa kwakhe ikakhulu ngamadoda kumenza abone futhi amukele ukuthi iNingizimu Afrika inohlobo lwamadoda angeyeseki injabulo yabesifazane.
“Kubuhlungu kakhulu ukuthi amadoda aseze abantekenteke/abuthaka ngale ndlela. Kodwa akungikhathazi kakhulu ngoba kuyakhombisa ukuthi asabanjani amadoda amanje,” kusho uKhanyi. Okumangaze abanye abantu besifazane nabebezwakala bemkhulumela ezinkundleni zokuxhumana wukuthi, uKhanyi ubizwa ngeqola ngenxa yendoda eyodwa endala nenemali athandana nayo esakhula, neyagcina ngokumshada uMandla Mthembu.
Yize kunjalo abantu basalokhu bemgxeka ngokuba yiqola elithanda izigwili. Lokhu kwenzeke ngisho esethandana nesoka lakhe leminyaka elingumculi uTebogo Lerole. Kukhona konke lokhu uKhanyi utshele leli phephandaba ukuthi usezifundise ukungakufaki enhliziyweni futhi akakweleti muntu incazelo ngempilo yakhe yangasese nezobudlelwano bothando.
Uveze nokuthi akazisoli nakancane ngezimo adlule kuzo empilweni. Eqhuba uthe uyazi akuyena yedwa umuntu wesifazane ongaphansi kwale ngcindezi kodwa uyafisa baqine abantu besifazane balwe nalesi sihlava ngobuhlakani.
“Kufanele ulimele iqiniso ngawe, ulwele ukuthula empilweni yakho ngokuvala amadlebe kwabakubangela umsindo,” kusho uKhanyi.
Ephetha uveze ukuthi okwamanje akukho okusha amatasa nakho ngaphandle kohlelo lwakhe oludlala kwiBET kuchannel 129 kwiDSTV lapho abantu bezokwazi kangcono ngaye nempilo yakhe.
Bancoma ukuphasiswa komthetho wesithembu
UGerry Nel uzwakalise ukuphoxeka engaveli 'ungqondongqondo' kwelikaMeyiwa
Ugwetshiwe owaphanga uR12 million
Uphenyo ngokushona kukadadewabo kaKhune
IBMW iphake impi kwiGolf GTI